Sida Loo Abuuro Snapchat Ad | Martech Zone
Sida Loo Abuuro Snapchat Ad
Isniintii, September 26, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Taylor Chrisman
Sanadihii la soo dhaafay, Snapchat ayaa ku soo kordhisay taageerayaasheeda in ka badan 100 milyan adduunka oo dhan iyadoo in ka badan 10 bilyan oo fiidiyow ah la daawado maalin kasta. Iyada oo tiro aad u tiro badan oo raacayaal ah barnaamijkan maalin kasta, waa wax lala yaabo in shirkadaha iyo xayeysiiyayaashu ay ku soo qulqulayaan Snapchat si ay ugu xayeysiiyaan suuqyadooda bartilmaameedka ah.
Millennials-ka hadda waxay u taagan yihiin 70% dhammaan isticmaaleyaasha Snapchat Iyadoo suuqleyda ay 500% ka badan ku bixiyaan millennials-ka marka loo eego kuwa kale oo dhan marka la isku daro, saameynta ay leeyihiin waa mid aan la dafiri karin. Nasiib darrose, shirkaduhu wali waxay isku dayaan inay suuq u suuqgeeyaan si ay ugu suuq galaan sidii ay ugu facayeen jiilalkii hore; si kastaba ha noqotee, sida jiil kasta, millennials waxay leeyihiin baahiyo gaar ah iyo baahiyo ay suuqyayaashu u baahan yihiin inay fahmaan si loogu guuleysto ololahooda.
Baraha bulshada sida Facebook iyo Instagram waxay ka faa'iideysanayeen adeegsigooda weyn si ay uga codsadaan magacyada doonaya inay xayeysiiyaan sanadaha hadda. In kasta oo Snapchat waxyar ka yara dheeraatay dhinaca xayeysiinta, haddana barnaamijka caanka ah wuxuu hadda u oggolaanayaa qof kasta oo ka socda shirkadaha waaweyn ilaa ganacsiyada maxalliga ah inay ku xayeysiiyaan barxadooda.
Waxaa jira saddex dariiqo oo aasaasi ah oo noocyadu u adeegsan karaan Snapchat si ay u gaaraan macaamiisha mustaqbalka: Iidhehyada Xayeysiiska ah, Jaangooyooyinka la kafaala qaaday, iyo Lensyada La Taageeray. Inta udhaxeysa seddexdan ikhtiyaar, shirkaduhu waxay leeyihiin xorriyad badan oo hal abuur leh sida ay u doonayaan inay u meeleeyaan astaantooda iyagoo ku saleynaya macaamiishooda bartilmaameedka.
Xulashada Xayeysiinta 1: Xayeysiiska Xayeysiinta
Xayeysiisyada 'Snap Ads' waa 10-seken, xayeysiisyo la iska boodi karo oo la dhexgeliyo inta u dhexeysa sheekooyinka Snap. Snapchatters-ka ayaa mari kara marka uu daawanayo xayeysiinta fiidiyow dheereeya ama maqaal ah si uu u helo aqoon dheeri ah. Fursadaha ayaa ah inaad ku aragtay xayeysiisyadan waqtigaaga sheekada, laakiin sidee u abuuri kartaa mid?
Shirkadaha waaweyn, Snapchat wuxuu uheystaa xulashadan xayeysiinta ah kuwa gaarka u ah ikhtiyaariyada qarash gareynta xayeysiinta Snapchat wuxuu leeyahay koox Wada-hawlgalayaal ah oo aad kula xiriiri karto emayl ahaan WehelkaInquiry@snapchat.com.
Xulashada Xayeysiinta 2: Xayaysiiska Geofilters
Geofilters-ka Sponsored-ka ah ayaa ah shaashado la beddeli karo oo aad ku dhejin kartid Snap-ka iyada oo ku saleysan goobtaada. Astaantan isdhexgalka waxay siineysaa Snapchatters fursad ay ku muujiyaan kuwa raacsan halka ay joogaan iyo waxa ay sameynayaan. Sida laga soo xigtay Xogta gudaha ee Snapchat, Hal Geofilter Qaranka ah oo Sponsored-ka ah wuxuu caadi ahaan gaaraa 40% ilaa 60% maalinkasta Snapchatters-ka Mareykanka. Sababtoo ah gaaritaankan iyo saameynta ballaaran, Snapchat wuxuu u noqday ikhtiyaar xayeysiis soo jiidasho leh shirkadaha waaweyn.
Si kastaba ha noqotee, Geofilters kuma koobna shirkadaha waaweyn. Sababtoo ah xayeysiisyadan ayaa ah kuwo si fudud loo abuuri karo, waxay caan ku noqdeen ganacsiyada yaryar iyo shaqsiyaadka .Haddaad olole u tahay xayeysiin qaran ama aad kaliya martigalinayso xaflad dhalasho oo lama filaan ah saaxiib, Sponsored Geofilters waa hab fiican oo lagula xiriiro adduunka. .
Abuuritaanka Geofilter kafaala qaaday
Design - Markaad bilaabeysid qaabeynta geofilter-kaaga khadka tooska ah, waxaad la kulmi doontaa laba ikhtiyaar. Waxaad dooran kartaa "Isticmaal Taada", taas oo aad ka abuureysid naqshad kuu gaar ah xoq adoo adeegsanaya Photoshop ama Tusaalooyinka Sawirka ee ay bixiso Snapchat. Ama, waad “abuuri kartaa khadka tooska ah” oo waxaad ka dooran kartaa xulashooyinka shaandhada sida ku xusan munaasabadda (tusaale dhalasho, dabaaldegyo, aroosyo iwm) Iyadoo aan loo eegin xulashada aad dooratay, hubi inaad aqriso Tilmaamaha gudbinta wixii faahfaahin ah ee ku saabsan waqtiga, sharciyada, iyo shuruudaha cabbirka muuqaalka!
Map - Marxaladda khariidaynta, waxaa lagaa codsan doonaa inaad doorato inta jeer ee shaandhadaadu noolaan doonto .. Sharci ahaan, Snapchat ma oggola in miirayaasha ay noolaadaan in ka badan 30 maalmood. Inta lagu jiro marxaladda khariidaynta, waxaad sidoo kale dooran doontaa aagga iyo goobta laga heli doono geofilter-kaaga. Si fudud u dhig "xayndaab" khariidada si aad u aragto inta geofilter kaaga ku kacayo iyada oo ku saleysan gacantiisa.
Iibso - Kadib naqshadeynta iyo khariidaynta geofilter-kaaga, waxaad u gudbin doontaa dib-u-eegis. Snapchat wuxuu caadi ahaan kaga jawaabi doonaa hal maalin ganacsi gudahood. Markaad oggolaato, ku iibso Geofilter-kaaga bogga Snapchat oo sug inuu si toos ah u noolaado!
Xulashada Xayeysiinta 3: Lens Sponsored
Xulashada seddexaad ee xayeysiinta Snapchat ee noocyadu isticmaali karaan waa Lens Sponsored. Muraayaddu waa astaamaha aqoonsiga wejiga ee Snapchat-ka kaas oo awood u siinaya farshaxanka hal-abuurka ah in lagu dhajiyo dusha wejiga isticmaalaha. Muraayadahaani maalin kasta way is beddelaan waana kuwo aan kala sooc lahayn oo ula kac ah sida Snapchat doonayo.
Inkasta oo muraayadaha indhaha intooda badani ay abuureen Snapchat, shirkaduhu waxay abuuri karaan oo iibsan karaan muraayadaha indhaha ujeeddooyin xayeysiin ah. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah muraayadaha la kafaala qaaday ayaa qaali ku ah iibsashada, waxaan caadi ahaan u aragnaa kaliya muraayadaha indhaha noocyada waaweyn sida Gatorade ama Taco Bell.
In kasta oo ay u muuqan karto doqonimo in lagu kharash gareeyo $ 450K - $ 750K maalintii ololaha Snapchat, shirkadaha waaweyn waxay caddeeyeen in maal-gashiga muraayadaha isboorti ay si weyn u faa'iido leedahay. Gatorade "Super Bowl Victory Lense", waxaa la ciyaaray in ka badan 60 milyan oo jeer, kuna faanaya 165 milyan oo aragti! Natiijo ahaan, Gatorade wuxuu arkay 8% koror ah ujeedka iibsiga.
Iyada oo ku saleysan tirooyinkan, waxaa iska cad in awoodda Lens Sponsored ay tahay wax cajiib ah. Sababtoo ah qiimaha badan ee laxiriira iyaga, Snapchat wuxuu ku xaddiday muraayadaha indhaha ee muraayadaha noocyada waaweyn ee leh miisaaniyad muhiim ah. Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo inaad haysato $ 450K- $ 750K oo hareerahaaga ah oo aad rabto inaad sameyso Lense Sponsored, la xiriir mid ka mid ah Wada-hawlgalayaasha xayeysiinta ee Snapchat ama emayl ugu dir iyaga WehelkaInquiry@snapchat.com. Wada-hawlgalayaasha ayaa kaa caawin doona tallaabo kasta oo istiraatiijiyad olole ah iyagoo ku siinaya talooyin hal abuur leh kana jawaabaya wixii su'aalo ah ee aad qabto ..
Iyada oo leh saldhig weyn oo isticmaale ah iyo ikhtiyaarrada xayeysiinta hal-abuurka leh, Snapchat wuxuu caddeeyay inuu yahay barxad aad u faa'iido badan oo loogu talagalay shirkadaha dhammaan noocyada iyo cabbirka si ay ula falgalaan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah. Haddii aad qorsheyneyso dhacdo ama aad soo saareyso wax soo saar cusub, tixgeli mid ka mid ah xulashooyinka aan kor ku soo xusnay oo bilow inaad aragto beddelaadaha cirka isku shareeraya!
Tags: millennialsxayeysiis dhakhso ahxayeysiiska snapchatxayeysiinta snapchatsnapchat geofiltermuraayada snapchatxayeysiiska Snapchat snapchatlenses kafaala qaaday snapchat
Taylor Chrisman wuxuu qayb ka yahay kooxda Suuqgeynta Mawduucyada at Suuq geynta Awoodda. Waxay aad u jeceshahay inay u sheegto sheekooyinka caanka ah iyada oo loo marayo is-dhexgal iyo ka-qaybgal waxyaabo iyo baraha bulshada.
Taylor waa sarkaal sare oo ka tirsan Jaamacadda San Diego oo bartay Suuqgeynta.
DeviceRank: Qiimaha ku rakibida App-ka Mobilada iyo Khiyaanada Howlgelinta
Jan 27, 2017 at 3: 33 AM
Waxaan isweydiinayay miyaad aqoon u leedahay sida loo abuuro lenses-ka Snapchat-ka, Softwareskee ay adeegsadaan? laga yaabee inaad ogtahay.